BEERALEY BRITISH AH WAXAY KU DHINTEEN DARAWALLADA DARAWALKA GAARIGA - MAQAALLO
Beeraley British ah waxay ku dhinteen darawallada darawalka gaariga
Masiibo ayaa ka dhacday beerta daaqada ingiriiska ah ee Derek Mead. Ninka wuxuu ahaa dhibane udub dhexaad u ah iyo falalka miyir la'aanta ah ee eey la jecel yahay.
"Derek wuxuu bilaabay baabuurkiisa wuxuuna ka soo baxay xerada si uu u xiro albaabka u horseeday barxadda," saaxiibadii maydka ayaa u sheegey. "Dabadeedna, dameerka ayaa ahaa eeygii Derek, waxay ku cadaadisay qalabka gaas ee baabuurka."
Eeda eygu wuxuu ujoogaa nolosha beeralayda: baabuurtu waxay si toos ah u waday Mead oo waxay ku dhufatay inta u dhaxaysa daboolka iyo irdaha biraha. Dhibaatadu waxay ahayd mid adag oo aan la socon karin nolosha.
Meydka Derek waxaa lagu ogaaday wiilkiisa. Waxa uu u yeeray dhakhaatiirta, laakiin si loo keeno Mead noloshii dambe ma suura galin. Wareegga baabuurka, dhakhtarrada iyo wiilka meydka ayaa helay eyga. Ka dib markii baaritaan gaaban, wakiillada Xafiiska Caafimaadka iyo Ammaanka ee UK ayaa soo saaray go'aanka: beeralaygu wuxuu u dhintay sida ay uga timid falalka eyga.